ridza Yakamisikidzwa kusvika 2022: Kutarisira Zhizha - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Jan 25, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau, Tamba!
Mutambo! muDuisburg yakamisikidzwa kuna Chikunguru, iyo inoronga Nostheide Verlag yakazivisa. Zvakanga zvakarongwa kuti mitambo iyi iite zvakanaka kubva munaKurume 25 kusvika 27 munzvimbo yepaki muDuisburg.
Nostheide Verlag inopa iyo corona mamiriro akatenderedza Omikron sechikonzero chekumisikidza. Zuva rechiitiko rakasundirwa kumashure neinenge mwedzi mitatu: mutambo! 2022 ikozvino yakarongerwa kuitika kubva Chikunguru 1st kusvika 3rd.
Mamiriro ezvinhu akatenderedza Omicron musiyano ari kuramba achiwedzera kubva pakutonga. Marabhoritari ari kusvika paagumira paanenge achiongorora bvunzo shoma dzePCR zvichienzaniswa nedzimwe nyika, uye mamiriro ezvinhu muzvikoro anowanzo kunetsa - mawadhi akajairwa muzvipatara ari kuzadza, asi nzvimbo yevanorwara zvakanyanya haisati yasvika.
Chisarudzo "chinodikanwa uye chine musoro"
Iyo Nuremberg Toy Fair yakatosundira mberi nesarudzo yayo yekudzima yekutanga yakakodzera mutambo fairi ya2022. Pane kudaro, gore rino, zvakare, vari kubheja pa yakachena online pfungwa. Mutambo! muDuisburg chikamu chechipiri chekutengeserana chingadai chiri muchikamu chekutanga chegore idzva - muna Kurume vashanyi vangadai vakakokwa kuDuisburg Landscape Park. Hapana chichauya pazviri: mutambo unongofanirwa kuuya muzhizha! 2022 zvino zvichaitika, sekureva kwaNostheide Verlag. Chiitiko ichi chakarongwa kuitika kubva muna Chikunguru 1 kusvika 3.
"Omicron parizvino iri kukonzeresa kusazivana kukuru kuti veruzhinji vanogona here kuitwa," akadaro. "Saka tiri kumisikidza trade fair neinoda mwedzi mitatu." Vaparidzi vaiva nezvinovanetsa vamene, asi vakaunzwawo kuNostheide Verlag kubva kunze.
Mumwe anotarisira, nokuti muchirevo munhu angadai akamirira uye akamisa chisarudzo. Chimwe chezvikonzero mamiriro ezvinhu asingatarisirwi akatenderedza zviitiko zvikuru tichitarisa kukurumidza kupararira Omikron mutsauko: Muparidzi anofunga kuti "nekuda kweCorona Protection Ordinance muNRW uye nekuwedzera kwehutachiona nemhedzisiro yavo, chiitiko chikuru chakadai hachigone kuitwa" . Parizvino, mitambo yekutengeserana neveruzhinji yaingotenderwa chete kana yaiwanzonangana nekushanyirwa nevanhu vasingadarike mazana manomwe nemakumi mashanu panguva imwe chete.
“Ichi chisarudzo chepakutanga, icho chakanga chisiri nyore kwatiri, chinoita sechinodikanwa uye chine mufungo zvikuru kwatiri mukufarira avo vose vanobatanidzwa,” anodaro muparidzi ari kuronga mutambo wacho. "Tinovimba kuti muchanzwisisa izvi munguva dzino dzakakosha uye kuti SPIEL DOCH! ndichashanya muna Chikunguru."
Sekureva kwemuparidzi, matikiti akatotengwa anoramba ari kushanda kwemazuva evhiki anoenderana. Ruzivo rwunowanikwa online pa: spieldoch-messe.com.
Kare Vietnam board game Purple Haze inotanga mari
Inotevera Mitambo mitatu mitsva yeStar Wars: EA inoita kuti ive pamutemo
Gloomhaven: The Lion's Paws digital soon
Mutambo mutsva weBatman usina Batman? Gotham Knights yakazivisa
Diablo 4 Leak inokonzeresa: Artbook netsaona inozivisa mazita
Xbox Series X: Microsoft inosuma zviri pamutemo Xbox itsva